नेवार समुदायमा गुँला पर्व सुरु « AayoMail
नेवार समुदायमा गुँला पर्व सुरु
बौद्ध धर्मवलम्बी नेवार समुदायको गुँला पर्व मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल प्रतिपदाबाट यो पर्व सुरु हुन्छ।
एक महिनासम्म मनाइने यो पर्वमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका ठाउँंठाउँंमा बाजा बजाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ।
प्रत्येक दिन विहान बाजागाजाका साथ बौद्ध धर्मावलम्बी आफ्नो छुट्टाछुट्टै रुपमा बहाबहीहरु परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। गुँला बाजा टोलीमा बाँसुरी, खिं (एक प्रकारका मादल) लगायतका बाद्यबादन बजाई एक टोली जाने गर्दछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा विशेष गरेर शाक्य र बज्राचार्य समुदायले बाजा बजाउने चलन छ।
शाक्य, बज्राचार्यबाहेक यो बाजा कंशाकार, मानन्धर अनि प्रजापति थरका समुदायले पनि बजाई छुटाछुटै रुपमा परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। उनीहरु पनि यसरी नै आआफनो क्षेत्रका बहाबहीमा बाजागाजा बजाई नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछन्।
प्रत्येक दिन आआफनो क्षेत्रका मठमन्दिर, बौद्ध विहारका साथै विशेष दिनहरुमा विशेष ठाउँंहरुमा घुम्ने गर्दछन्।
गुँला बाजाको टोलीले नाग पञ्चमीका दिन भक्तपुरको चाँगुनारायण, जनैपूर्णिमा पाटनको बंगलामुखी मन्दिर पुग्ने गर्दछन्।
साथै कृष्ण जन्माष्टमीका दिन काठमाडौंको स्वयम्भू, विजेश्वरी, शोभा भगवती, मरुगणेश, जनबाहाल, सेतो मच्छिन्द्रनाथ परिक्रममा गरिने चलन छ।
त्यस्तै भक्तपुरको सूर्यविनायक, राममन्दिर, नवदुर्गा देवता घर, दत्तात्रय, पाँचतले मन्दिर, कमलविनायक परिक्रममा गरिने परम्परा छ।
अन्तिम दिन गुँला प्रतिपदाका दिन ललितपुरको बुङमती, कार्यविनायक, खोकना, जलविनायक हँुदै चोभारको करुणामय (आदित्यनाथ) परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। कला, संस्कृति भजन महागुथीका संस्थापक अध्यक्ष डा. इन्दुल केसीका अनुसार यो पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको विशेष पर्व हो।
डा. केसीका अनुसार पर्वभर वौद्ध धर्मावलम्वीहरु विशेष गरे माछा, मासु बारेर (नखाई) बस्छन्। घरघरमा मनाइने यो पर्वको क्रममा हरेक दिन विहान गुँला बाजाको परिक्रमा हुने उनी सुनाउँंछन्।
नेपाल भाषामा ‘गुँ’को अर्थ नवौ र ‘ला’को अर्थ महिना हो। यसरी गुँलाको पूरा अर्थ नवौ महिना हो। प्रत्येक वर्ष नेपाल सम्वतको नवौ महिनामा पर्ने भएकाले यो पर्वलाई गुँला पर्व भनिएको हो।
टोलटोलमा देखिने यो पर्वको प्रभाब घरघरमा पनि देखिन्छ। पर्व अवधिभर घरघरमा शाक्य बज्राचार्यहरु माछा मासु बारेर बस्छन्।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमिका कृष्णराम प्रजापतिका अनुसार फरकफरक जिल्लामा पर्व फरकफरक ठाउँमा परिक्रमा गरी मनाइन्छ।
मध्यपुर थिमिका प्रजापतिको गुँला बाजाको टोली स्थानीय बालकुमारीस्थित लोकेश्वर मन्दिरमा विशेष पूजा आरधना गरी सम्पन्न हुने उनले जनाए।
कला र संस्कृति विस्तारै लोप हँुुदै गइरहेको बेला यस्ता पर्वहरु अहिलेसम्म चल्नु सराह्रनीय रहेको उनको भनाई छ।
यस्ता पर्वलाई जोगाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
हरेक वर्ष चर्तुमासभित्रको गुँला परम्पराको एक महिनासम्म मनाइने गुँला धर्म बाजागाजामा आर्थिक अभावका कारण लोप भइरहेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा भने यो वर्ष पर्व भएन। यसबाहेक यहाँका मध्यपुर थिमि नगरपालिकालगायतका काठमाडौं उपत्यकाभर धुमधामका साथ पर्व मनाउन सुरु भएको छ।